Tuugo Dhac la yaab leh ka geystay magaalada Hargeysa (Gabar 5 sano jir ahayd oo ay xadeen...) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Tuugo Dhac la yaab leh ka geystay magaalada Hargeysa (Gabar 5 sano jir ahayd oo ay xadeen…)
Dhaco aan hore loo adag ayaa magaalada Hargeysa laga soo weriyey, kadib markii xalay Tuugo ay Guri u dhaceen, kadibna ay ka xadeen gabar yar oo shan sano jir ahayd.
Qoyska arrintan ku dhacday ayaa deganaa xaafadda Xeero ee magaalada Hargeysa, waxaana xalay xilli danbe la jeexay Guri Jiingad ah oo ay hurdayeen, kadibna ay qaateen gabadh shan sano jir ah oo lagu magacaabo umtaaz Maxamed Xasan.
Baaritaanka Gabadha la xaday ayaa ka socda magaalada Hargeysa, waxaana Booliska uu ku jiraa baaritaanka lagu baadi goobayo gabadha la xaday.
Waxaa lagu tilmaamay dhacdo aan hore loo arag oo ku cusub dadka magaalada Hargeysa, iyadoo dhaca caruurta guryahooda loogu galo habeenkii aan lagu aqoon halkaasi.
Previous articleMareykanka oo Jawaab debecsan ka soo saaray go’aanadii Shirkii Wadatashiga Doorashada ee Muqdisho
Next articleRW Rooble oo beeniyay Laba Qodob oo si weyn shaki badan looga qabay, kana mida Heshiiska Doorashada
Saameynta Dagaalka Guriceel: Duqeynta Isbitaalka Istarliin iyo Dhaawacyo Isbitaal lagala baxay